Dhawaan, Bitcoin waxay umuuqataa inay kujirto xaalad cakiran. In kasta oo qiimaha Bitcoin u muuqdo mid aad u kacsan, cryptocurrency ayaa ku jirtay muddo xoojin labadii toddobaad ee la soo dhaafay, ka dib markii ay si kooban u garaacday sare $ 7,470. Iskuduwaya inta udhaxeysa aagga sare ee $ 6,000 iyo aagga hoose ee $ 7,000. Ma ...
Bishii Oktoobar 31, 2008, Aqoonsi uu saxiixay Satoshi Nakamoto ayaa ku xaliyay dhibaatadan warqad ka kooban 9 bog oo ku saabsan sida lacagta laygu siinayo shabakad gebi ahaanba qarsoon oo baahsan. Hadda waxaan ognahay in ninka dahsoon ee loo yaqaan Satoshi Nakamoto iyo sagaalkaas bog ay ku sameeyeen hawad khafiif ah oo u dhiganta 100 biil ...
Horaantii 700 sano kahor intaan Iswiidhan soo saarin waraaqaha lacagta ee ugu horeeya Yurub 1661, Shiinaha wuxuu bilaabay inuu barto sida loo yareeyo culeyska dadka sita shilimada naxaasta ah. Qadaadiicdan ayaa nolosha adkeynaya: way culus tahay waxayna safarka ka dhigeysaa mid khatar ah. Markii dambe, baayacmushtariyadii waxay go'aansadeen inay lacagtan ku shubaan ...
weelka btc, weelka antbox, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka antminer-ka, weelka bitmain, crypto macdanta asic,